Call of Duty®: Mobile 1.0.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.6 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Call of Duty®: Mobile
Call of Duty®: Mobile ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Duty®၏ခေါ်ရန်: မိုဘိုင်းယခု Live နှင့်အနာဂတ်အတွက်လာပိုဆောင်းနယ်မြေများနှင့်အတူကနေဒါ, သြစတြေးလျနှင့်ပီရူးအတွက်သီးသန့်စမ်းသပ်နေပါတယ်။ www.callofduty.com/mobile မှာပိုပြီး updates တွေကိုဖမ်းယူနားဆင်နေပါ။
အထင်ကရ multiplayer မြေပုံဖြတ်ပြီး Fight နှငျ့သငျDuty®၏ကို Activision ရဲ့အမြင့်မား-မျှော်လင့်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်ကြိုးစားကြအဖြစ်ပန်ကာ-အကြိုက်ဆုံး Modes သာကစား: မိုဘိုင်း!
တာဝန် GAME Mode ကို icon ခေါ်ဆို PLAY
Duty®၏ခေါ်ဆိုမှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်: မိုဘိုင်းနှလုံး-ချပေးခေါင်းကို-to-ခေါင်းကို multiplayer ဖြစ်ပါတယ်။ Duty®၏ခေါ်ဆိုမှုအတွက်: Black က Ops နှင့်မူရင်းခေတ်သစ်Warfare®စီးရီး: မိုဘိုင်းသင်Duty®၏ခေါ်ဆိုမှုများအပါအဝင်ခေါ်ဆိုမှုDuty®၏ franchise, တလွှားကနေအများအပြားဂန္မြေပုံများနှင့် Modes သာကစားပါလိမ့်မယ်။ multiplayer ရုံက start ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်လအတွင်းကျော်, နောက်ထပ်ဂိမ်းသည် Modes အပေါ် updates တွေကိုဖမ်းယူနားဆင်နေဖို့။
တာဝန်လမ်း Battle Royal ခေါ်ဆိုမှု PLAY
တိုက်ပွဲ Royale mode ကို Play; Duty စကွဝဠာ၏ခေါ်ဆိုမှုအတွင်းကနေအမျိုးအစားပေါ်ထူးခြားတဲ့ ယူ. အထူးသ built နှင့် Duty ၏ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့: မိုဘိုင်း။ သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရှင်သန်မှုတစ်ခုပြင်းထန်သောနှင့်မော်ကွန်းရန်ပွဲအတွက်ဂိမ်းကိုဖြတ်ပြီးကနေဒြပ်စင်များနှင့်မြေပုံတည်နေရာကိုဖြတ်ပြီးတိုက်ခြင်း, 100 ကိုပြိုင်ဘက်တစ်ကိုယ်တော်, Duo, ဒါမှမဟုတ် Quad အသင်းသည် Modes နှင့်အတူရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအာဏာအဘို့စစ်တိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖွင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မြေ, သမုဒ္ဒရာ, လေထုကိုဖြတ်ပြီးပိုမြန်သွားလာလမ်းကြောင်းများနှင့်တိုက်ပွဲများအဘို့အခွင့်ပြုခြင်း, ATVs, ရဟတ်ယာဉ်များ, 4x4s နှင့်နည်းဗျူဟာရေဖောင်အပါအဝင်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုး, မောင်းများနှင့်လေယာဉ်မှူး! သင်၌ drop မီ, တစ်ဦးချင်းစီစစ်တိုက်ရှေ့၌သင်တို့အော်ပရေတာလူတန်းစားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်မေ့လျော့မထင်သော်လည်း, တစ်ခုချင်းစီကိုအတန်းအစားမှထူးခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဂီယာကို item အတူ။
သင့် UNIQUE LOADOUT customize
သငျသညျDuty®၏ခေါ်ဆိုမှု play အဖြစ်: မိုဘိုင်းသင်သည်သင်၏ loadouts စိတ်ကြိုက်သုံးနိုငျသောခေါ်ရန်Duty®၏စကွဝဠာကနေဂီယာအမျိုးမျိုးအထင်ကရဇာတ်ကောင်, လက်နက်, မတ်မတ်, scorestreaks နှင့်အပိုင်းပိုင်းဝင်ငွေနဲ့သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
ပြိုင်ဆိုင်အဆင့် Play and Clan
သငျသညျသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆော့ကစားအဖြစ် In-ဂိမ်းဆုယှဉ်ပြိုင်အဆင့် Mode တွင်ထိပ်တန်းမှထမြောက်, ဒါမှမဟုတ် Clan ရဲ့အနိုင်ရရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။
အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်? Call of Duty: မိုဘိုင်းအခမဲ့-to-play ပါ! Duty®၏ခေါ်ရန်ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သေနတ်သမားအတွေ့အကြုံကိုသာလွန်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူမိုဘိုင်းမှကြွလာခြင်းနှင့်ဂိမ်းပရိသတ်တွေချစ်ရန်သေချာပါသည်။
ကအကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်ဖို့ကြာသောအရာကိုရှိပါသလား? Duty®၏ခေါ်ဆိုမှု Download: Mobile ကယခု!
ကျနော်တို့ဂိမ်းတိုးတက်စေရန်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုစဉ်အတွင်းမည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်ကြိုဆိုပါတယ်။ In-ဂိမ်းတုံ့ပြန်ချက်ပေးရ> Setting> တုံ့ပြန်ချက်ကိုသွား> ဆက်သွယ်ရန်။
အပ်ဒိတ်များအဘို့ Subscribe! ---> profile.callofduty.com/cod/registerMobileGame
ဒီ app ကိုသင်ချိတ်ဆက်နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆော့ကစားခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်အသစ်အကြောင်းအရာဂိမ်းထဲမှာရာအရပျကိုယူပြီးကြသောအခါသင်တို့ကိုအကြောင်းကြားရန်အကြောင်းကြားစာများကိုတွန်းဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းလူမှုရေး features တွေပါဝင်ပါတယ်သတိပြုပါ။ သင်တို့သည်ဤအင်္ဂါရပ်များကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရန်ဖြစ်စေမရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကို Activision app ကို features တွေသို့မဟုတ်ကစားရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. မပါအာမခံချက်ကိုအသိပေးစရာမလိုဘဲသူ့ရဲ့သမ္မာသတိအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်အဆက်ဖြတ်စေနိုင်သည်။
တာဝန် BLACK Ops ၏© 2019 ကို Activision ထုတ်ဝေရေး, Inc Activision, ခေါ်ဆိုခြင်း, တာဝန်တာဝန် Modern Warfare များနှင့်ခေါ်ဆိုမှုများကိုခေါ်ဆိုအားလုံးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုန်သွယ်မှုအမည်များကို၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါသည်ကို Activision ထုတ်ဝေရေး, Inc ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီ App ကို, ဒေါင်းလုပ် install လုပ်ပါသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်အခြိနျမှနျမှကို Activision အားဖြင့် update လုပ်စေခြင်းငှါအဖြစ်ကို Activision ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒနှင့်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုသဘောတူသည်။ အသုံးပြုမှုကို Activision ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုကြည့်ရှုရန်ကို Activision ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒနှင့် https://www.activision.com/legal/terms-of-use ကြည့်ရှုရန် https://www.activision.com/legal/privacy-policy သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Call of Duty®: Mobile အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Call of Duty®: Mobile အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Call of Duty®: Mobile အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Call of Duty®: Mobile အား အခ်က္ျပပါ
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 72
လိုင္စင္ လိုအပ္သည္ 26
app အတု 21
alexander1111 စတိုး 30 64.59k
Call of Duty®: Mobile ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Call of Duty®: Mobile အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.0.6
ထုတ်လုပ်သူ Activision Publishing, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.activision.com/privacy/en/privacy.html
လက်မှတ် SHA1: E1:68:28:46:3F:21:02:D7:F8:32:AE:B4:1E:3D:8F:ED:D4:97:EC:A0
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Daniel Nichols
အဖွဲ့အစည်း (O): "Activision Publishing
နယ်မြေ (L): El Segundo
Call of Duty®: Mobile APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ